नेपाल भूकम्प : विगत आठ सय वर्षमा ५० वटा ठूला भूकम्प, राजाको पनि ज्यान गएको थियो
बिबिसी । चार वर्षअघि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी भैँचालो जानुअघिसम्म धेरैले ‘नब्बे सालको भैँचालो’ भनेर चिन्ने वि.सं. १९९० को भूकम्पलाई पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो भैँचालोको रूपमा लिने गर्थे।
भैँचालोको जोखिम क्षेत्रमा रहेको भनिएको नेपालमा वारंवार ‘नब्बे सालको जस्तै भैँचालो आउन सक्छ’ भनेर जनमानसलाई सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेको पाइन्थ्यो।
चार वर्षअघिको भैँचालोमा हामीले आफ्नै पालामा हाम्रा बा वा हजुरबाहरूले सुनाउने गरेको ‘नब्बे सालको भैँचालोको कथा’ जस्तै भयानक विपद् भोग्यौँ।
तर न सर्वसाधारण न त सरकारी ओहोदामा रहनेहरूले त्यस भैँचालोबाट पाठ लिएको देखिन्छ।
अहिले पनि भैँचालो थाम्ने खाले निर्माण नभइरहेको गुनासो सार्वजनिक हुने गरेको छ।
त्यस्ता भैँचालाको प्रभाव देशका धेरै भागमा परेको विवरणहरू पाइन्छन्।
भैँचालाहरूको कुरा गर्दा धेरैले सम्झना गर्ने पुस्तकमध्येमा ब्रह्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाले लेखेको ‘नेपालको महाभूकम्प’ पर्छ।
यो नब्बे सालको भैँचालो गएको एक वर्षपछि प्रकाशित भएको थियो।
तर त्यसमा नब्बे साल अघिको भैँचालोबारे राणाले लेख्दा गल्ती हुन गएको भनी नयराज पन्त भन्ने गर्थे।
उक्त पुस्तकको आफ्नो निजी प्रतिमा उनले त्यसको संशोधन पनि गरेर राखेका थिए।
अध्ययन गर्दै जाँदा मैले पनि त्यो पुस्तकमा गल्तीहरू भेट्दै गएँ।
नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भशास्त्रविद् र भूकम्पविद्याविद् जीआर चित्रकार र माधवराज पाण्डेले अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेको ‘इतिहासमा चढेका, नेपालमा गएका भैँचाला’ भन्ने एउटा लेखमा पनि ब्रह्मशमशेरकै गल्ती दोहोर्‍याएको भेटियो।
यस्तै कारणहरूले मैले नेपालमा गएका भैँचालाहरूको इतिहास खोतल्ने निधो गरेँ र वि.सं. १८६८ जेठ २४ गते गएको एउटा भैँचालोबारे सप्रमाण लेखी संशोधन मण्डलद्वारा प्रकाशित हुँदै आएको ‘पूर्णिमा’को ९५ पूर्णाङ्कमा त्यसलाई २०५५ सालमा छपाएँ।
फ्रान्सको ‘सँत्र नासओनल् दे ला रशेर्‍शे साँतिफिक्’ अर्थात् शास्त्रीय अन्वेषणको राष्ट्रिय केन्द्रबाट मलाई २०५६ सालको हिउँदमा तीन महिनाका लागि त्यहाँ अन्वेषण गर्ने प्रस्ताव आयो।
मैले त्यहाँ तीन महिनामा सकिने खालको अन्वेषण गर्नुपर्ने थियो।
त्यसैले मैले नेपालका भैँचालाकै विषय समातेँ। प्यारिसमा गरेको त्यस अध्ययनबाट एउटा छाप्न मिल्ने पुस्तिका नै तयार भयो।
त्यो लेख २०५७ वैशाख ८ गते काठमाण्डूमा भएको एउटा गोष्ठीमा प्रस्तुत हुनुका साथै संशोधन मण्डलबाट प्रकाशित भएको अङ्ग्रेजी भाषाको जर्नल ‘आदर्श’मा पनि त्यो लेख छापियो।
पछि प्यारिसबाट पनि उक्त लेखको सारांश फ्रेन्च भाषामा छापिएको छ।
यो त्यस वर्षको पौष शुक्ल प्रतिपदाका दिन गएको भनिएको छ।
मैले अध्ययन गर्दा लक्ष्मीपति-नयराज सङ्ग्रहमा जुनजुन सालका पात्राहरू उपलब्ध भए तिनको पनि उपयोग गरेँ।
त्यस क्रममा एकै साल पनि धेरैवटा भैँचालाहरू गएको तथ्य भेटिन्छ।
चाँडचाँडै दोहोरिएका भैँचालाहरू अहिले भन्ने गरिएको परकम्प पनि हुनसक्छन्।
वि.सं. १४०१ मा गएको भैँचालोलाई चाहिँ ठूलो भैँचालो भनेर गोपालराजवंशावलीमा लेखिएको छ।
त्यो भैँचालो दशैँको फूलपातीका दिन गएको रहेछ।
त्यसबेला राजाहरूको राज्याभिषेक देउपाटनमा नै गर्ने चलन थियो।
मृत्यु हुन लागेकाहरूलाई पशुपतिक्षेत्र लाने चलनअनुसार अरि मल्ललाई पनि त्यसबेला देउपाटन लगिएको हुनसक्छ।
त्यस यता २०४५ सालमा मझौला खालको र २०७२ सालमा ठूलो भैँचालो गएका हुन्।
झन्डै आठ सय वर्ष (७९५ वर्ष)को नेपालको इतिहासमा २०४५ सालको भैँचालोलाई पनि सामेल गर्दा कुल ५० वटा ठूला भैँचाला गएको देखिन्छ।
तर इतिहासमा न यस्तो औसत निकाल्न मिल्छ न त त्यसो गर्नु वैज्ञानिक नै हुन्छ।
यसरी औसत निकाल्न किन पनि मिल्दैन भने कुनैकुनै साल एकै वर्षमा धेरैपटक भैँचाला पनि गएका छन्।
यसले नेपाल भैँचालाको जोखिममा रहेको कुरालाई भने स्पष्ट पार्छ।
इतिहासका यी विवरणहरूको विश्लेषण गरेर भूकम्पविद्याविद्हरूले आफ्नै ढङ्गले वैज्ञानिक विश्लेषण पनि गर्न सक्लान्।
भैँचालोको इतिहासको जे जति खोजी भयो त्यो पनि एकाध मानिसको व्यक्तिगत प्रयासमा भएकोले यो निकै अपूर्ण छ।
भैँचालाको बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तर्फबाट प्रशस्त खर्च भइरहेको छ।
भैँचालोको इतिहासको खोजीमा योग्य व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पेको खण्डमा अझ बढी प्रकाश पर्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ।
(यो सामग्री बिबिसी नेपालीको अनलाइन संस्करणबाट लिइएको हाे।)